IFirefox ibandakanya uphuculo olutsha kwisikhangeli sayo seMac | Ndisuka mac
IFirefox ibandakanya ukuphuculwa okutsha kwisikhangeli sayo seMac
Imfazwe yesikhangeli esikhawulezayo nesezinzileyo seMacOS kudala sayame kwiChannel nakwiSafari. Ezinye iibrawuza zizama ukunika umsebenzisi ezinye izinto ukuze ezahlule kwaye zitsale abathengi ngezinto ezingafakwanga okanye ezingafikelelekiyo. Le yimeko yeFirefox. Inkampani yeempungutye ilungiselela inguqulelo entsha esiza kuyibona ngo-Novemba, eyaziwa ngegama lika Quantum. Phambi kokunduluka, kubandakanya imisebenzi emitsha eyenza kube lula ngathi ukuhamba ngamanye amaxesha, ukwenza umsebenzi wethu ubelula mihla le.
Okokuqala, kubandakanya umsebenzi okuvumela ukuba umfanekiso weskrini ngokuthe ngqo kwisikhangeli, ngaphandle kokubhenela kulwandiso okanye usetyenziso lwangaphandle. Umsebenzi wenziwe ngokucinezela iqhosha. Nje ukuba sisebenze, siya kunxibelelwano esivumela ukuba sikhethe inani loxwebhu esifuna ukuligcina okanye ukwamkela uluvo lokuba isicelo sicebisa. Nje ukuba kwenziwe uhlengahlengiso oluhambelanayo, kufuneka sigcine umfanekiso okanye sivelise i-URL ukuze sabelane ngomfanekiso okanye siwugcine ukhuphele umfanekiso kwixa elizayo kwi-Mac. Iiveki ezi-2.
Enye into ebalaseleyo yenguqulo entsha kukukwazi yabelana ngeethebhu. Emva kokucofa ngeminwe emibini, sinokukhetha umsebenzi «thumela ithebhu ku ...» kwaye ukhethe esinye isixhobo esineFirefox efakiweyo. Singayithumela nakwi-iPhone yethu okanye kwi-iPad kwaye siyivule ngokukhawuleza yakuba ifunyenwe. Lo msebenzi unokwenziwa ngokuchaseneyo, oko kukuthi, ukusuka kwisixhobo se-iOS ukuya kwi-Mac yethu.
Iindaba zamva nje zinento yokwenza nokuba gcwalisa iifom ngokukhawuleza nangokulula, ngokufanayo nefitsha yeSafari. Kubonakala ngathi eli nqaku liza kuqala e-US kwaye siza kulibona eYurophu kungekudala. Kukulungele ukugcwalisa iifom zenkqubo yolawulo okanye ukubhalisa inkonzo okanye iphepha lokuthenga. Kwimizuzwana nje, ifom epheleleyo iyafumaneka. Emva kokufaka iinkcukacha zonxibelelwano okokuqala kwaye ucofe kugcino, ngalo lonke ixesha ufuna ukunika idilesi, inombolo yomnxeba okanye enye iparameter, iFirefox iya kucebisa ngolwazi olugciniweyo. Unokuba needilesi ezininzi ezigciniweyo ezinje nge: ikhaya, umsebenzi, kunye nekhaya losapho.
Unokuzikhuphelela ingxelo yamva nje yesikhangeli kwezi zilandelayo unxibelelwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IFirefox ibandakanya ukuphuculwa okutsha kwisikhangeli sayo seMac
"I-Fluid Mask 3" kunye ne "DefenseVPN", ii -apps zepremiyamu ngexabiso elincitshiswe kakhulu
UGoogle unciphisa ixabiso levenkile yakhe yevidiyo kwiimovie ze4k